वर्णन मिडिया वाइडबडी प्रकरण : देउवाले छानबिन माग गर्दा सरकार संकटमा ? - वर्णन मिडिया
०३-आश्विन-२०७६ | ०६:४७:५५ pm
असोज २ गते शेर बहादुर देउवाले वाइडवडिको फाईल खोलेर जो दोषि छन् तिनलाई कारवाही गर्न माग गर्नासाथ नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरंग आएको छ । अहिलेसम्म देउवा पनि वाइडवडीमा फसेकोले शत्ता र प्रतिपक्ष मिलेर यो फाइल लुकाइयो भन्ने जनआवाज थियो । तर एक्कासी देउवाले फाइल खोल्न चेतावनी दिएपछि शत्तापक्ष तिल्मिलाएको छ । मतलव नैतिक रुपमा तिल्मिलाएको छ ।
बाहिर हल्ला गरेर फेसबुकमा कोही तिल्मिलाउने कुरा भएन । देउवाले म दोषि भए कारवाही गर अन्यथा जो दोषी छ उसलाई कारवाही गर भनेपछि अव नेकपा पहिलो पटक भ्रष्टाचारको आहलमा देखिने निश्चत छ ।
यो सुन्दा सामान्य लागेपनि बाम राजनीतिमा वाइड वडि एउटा ठूलो क्यान्सर हो । सवैलाई थाहा छ । अहिले ओलीले अख्तियारमार्फत त्यसमा किमो थेरापी गरेपनि एक दिन यो फाइल खोलिने छ ।
जसरी भारतमा पुर्व अर्थ गृह मन्त्री चिदम्वरमको फाइल खोलीयो । त्यसैगरी एक दिन वाइडवडीको फाइल कसै न कसैले खोल्ने छ । यदि खोलीदैन भने नेपाली युवाले राजनीतिको र उच्चारण नगर्दा पनि हुन्छ ।
यसैगरी आज ३ गते पनि पूर्वप्रधानमन्त्री सभापति देउवाले संविधानको मूलभूत सिद्धान्तमाथि दायाँबायाँ नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।
् संविधान दिवसको अवसर पारेर शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानको भावना विपरित सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानव अधिकार आयोगसम्बन्धि विधेयक ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सहमति जनाउन नसकिने कुरा आफूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत भनि सकेको जानकारी दिए।
मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु, निर्वाध बोल्ने, लेख्ने संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकार पनि हनन् हुने गरी सरकारले विभिन्न विधेयकहरु ल्याएको छ’ सभापति देउवाको भनाई थियो। त्यस्ता विधेयक ल्याएर संविधानलाई लंगडो बनाउन पाईदैन।’
यि भनाई सामान्य बोल्नका लागि बोलिएका हुन् भने थाहाभएन अन्यथा यसले ठुलै चुनाैति निम्त्याउन सक्छ । सरकारमािथ
अहिले सरकार लगभग हरेक मोर्चामा असफल भएको अवस्थामा प्रतिपक्षको यो आवाज जुन आफैमा फरक खालको छ ।
कांग्रेसले के गर्न सक्छ ? भन्ने प्रश्नमा अहिले पनि कांग्रेसका लाखौ भोटर छन् , राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि सरकार वाहिर छ र हिन्दु धर्मवादी तथा राजतन्त्रवादी पनि शत्तासंग नजिग छैनन् ।
यो अवस्थामा देउवाको यो भाषणलाई सामान्य रुपमा हेर्न नमिल्ने पर्यवेक्षकहरु बताउँदछन् ।
सरकारले कर बढाउदछ, विकास गर्दैन, अदालत, अख्तियार, निर्वाचन आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण प्रमको मातहतमा राखेर नेकपाका विरुद्ध केही गर्नेलाई २ तिहाईको धम्की दिन्छ ।
प्रतिपक्ष एक्सनमा आउनु त स्वभाविक हो तर तत्काल उसंग संख्या बल छैन ।
त्यसैले ठूलै आन्दोलन नभएसम्म शत्ता परिवर्तन गर्ने आधार त छैन तर देउवाका २ दिनका भाषणले केही त संकेत गर्दछ ।
त्यो संकेतको परिणती जे जस्तो भएपनि सरकारले जसरी देशको नेतृत्व गर्नु पर्ने थियो त्यसरी गर्न सकेको छैन ।
यो कुरामा सरकार ले अरुलाई दोष दिन्छ तर आफ्नो कृयाकलाप हेरेको छैन । यहि रोग राणा, राजतन्त्र, कंग्रेस, आदि सवैमा थियो ।
यसपृष्ठभूमिमा सरकारको समस्यामा केही बढोत्तरी नहोला भन्न सकिदैन ।
राजतंन्त्र ओभर नाइट सुइकेको देशमा ओलीकोसरकार अजम्वरी होला भन्ने परिकल्पना गर्नु घाममा राखेको नौनी नपग्लिएला भन्ने जस्तो सोचमात्र हो । यहाँ घाम नेकपा भित्र, बाहिर र देश वाहिरबाट समेत नझुल्केला भन्न सकिदैन । कुरा नाैनी कति दाेषी छ भन्नेमात्र हाे ।